Wararka Archives - FOOLAAD MEDIA
Wararka ka imanaya bariga Somaliland ayaa sheegaya in xoogagga Al Shabaab ay si buuxda ula wareegeen deggaan istiraatiiji ah oo ka tirsan gobolka Sanaag. Deggaankan oo lagu magacaabo Gacan-Maroodi ayaa qiyaastii 50 KM u jira magaalada Ceerigaabo oo ah magaalo-madaxda gobolka Sanaag. War rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Al Shabaab, ayaa lagu xaqiijiyey in ciidamadoodu ay qabsadeen deggaanka Gacan-Maroodi, ...
Xarakada Jihaadiga Taliban ayaa kusii xididaysanaysa wadanka Afghanistan xilli uu sare usii kacayo khasaaraha nafeed ee ciidamada Mareykanka kasoo gaaraya dagaalka wadankaasi ka socda. Wararka Afghanistan ka imaanaya ayaa sheegaya in weeraro 5-tii maalmood ee lasoo dhaafay dhacay lagu dilay askar American ah, war qoraal ah oo kasoo baxay Ururka NATO ayaa lagu sheegay in weerar isbuucii lasoo dhaafay dhacay ...
Michel Kabango oo ah Abaanduule katirsan ciidamada AMISOM ee duullaanka ku jooga dalka Soomaaliya ayaa meesha ka saaray suuragalnimada in ay guud ahaan dalka Soomaaliya ka tirtiraan awoodda Xarakada Al-Shabaab, isagoona sheegay inuusan isbaheysigoodu heysan awood ciidan iyo agab ku filan oo ay ku qabsan karaan guud ahaan dalka Soomaaliya. Kabango oo katirsan saraakiisha ciidamada Uganda ee jooga Soomaaliya islamarkaana ...
Dood kulul ayaa ka taagan gudaha wadanka Hindiya kadib markii Fanaanad caan aheyd ay ku dhawaaqday in ay isaga baxday Fanka ayna Alle uga Towbadkeentay xumaantii iyo baadidii ay dhax muquuranaysay. Zuheyrah Wassiim oo caan ka ah Hindiya iyo wadamada dariska la ah laguna yaqiinay jilista Filimada iyo duubista heesaha ayaa qaadatay go’aan lama filaan ah oo ka yaabiyay caalamka ...
Wararka ka imanaya deggaanka Weydoow ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax xoogan lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa DF Soomaaliya oo ka yimi dhanka Sh/hoose kuna sii jeeday Muqdisho. Qaraxan ayaa lala helay gaari nooca dagaalka ah ee ay Soomaalidu u taqaano “Cabdi Bile” waxaana la sheegay in uu gabi ahaanba burburay gaariga islamarkaana ay haraadigiisa goobta ka ...
Dagaalyahanno aad u hubeysan oo katirsan ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa duulaan ku qaaday saldhig ay ciidamada Kenya ku leeyihiin deegaan u dhow magaalada Gaarisa ee dhulka NFD. Saldhiga ay ciidamada Mujaahidiinta weerareen waxaa uu ku yaalaa deegaanka Yuumbis oo u dhow magaalada Gaarisa, waxaana gebi ahaanba saldhiga lagala wareegay ciidamada Kenyaatiga. Weerarka oo dhacay saqdii dhexe ee xalay, ayaa ...
Suldaan Maxamad Gar Yare oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee sida aadka ah ugu dhuun daloola arrimaha Bariga iyo Geeska Afrika ayaa idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan uga waramay Sawirkii ay shalay baahisay dowladda Itoobiya oo ay kusoo bandhigtay muuqaalka qaaradda Afrika kaasoo ay ka saartay dalka Soomaaliya, sida muuqatayna ku darsatay wadankeeda. Inkastoo ay markii dambe barahooda gaarka ah ...
Ilaahay naxariistiisa Janno haka waraabiyee waxaa saaka degmada Ibraahim Koodbuur gaar ahaan xaafadda Xero Awr ee magaalada Hargeysa ku geeriyooday Sheekh Cabdilaahi Cabdi Cali oo ka mid ahaa hal-doorka culimada Somaliland. Sheekha ayaa muddooyinkan dambe u jiifay xanuuna, waxaana haatan si xooggan uga socda magaalada Hargeysa abaabulka Janaasada oo duhurnimada haddii Eebbe ogolaado lagu aasi doono xabaalaha Baqiic ee Waqooyiga ...